Ahoana no fiatrehan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Widerøe ny oram-baratra COVID-19 tena tsara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Norvezy » Ahoana no fiatrehan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Widerøe ny oram-baratra COVID-19 tena tsara
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao Mafana Norvezy • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Tale jeneralin'ny Airline Wideroe ao Norvezy
Ny tonian-dahatsoratra mpanatanteraky ny Aviation Weekly Network, Jens Flottau, dia niara-nipetraka tamin'ny Tale jeneralin'ny mpitatitra isam-paritra norveziana, Widerøe, Stein Nilsen.
Widerøe dia zotram-piaramanidina an-toerana izay miasa amina fiaramanidina Dash 8s sy Embraer 190E2 amin'ny tambajotram-pitaterana matevina, amoron'ny morontsiraka andrefan'i Norvezy.
Nandritra ny fotoana fohy nandritra ny dingana voalohan'ny areti-mifindra COVID-19, Widerøe no zotram-piaramanidina be olona indrindra any Eropa izay manakaiky ny sidina 200 isan'andro.
Mampifandray ireo toerana lavitra any amin'ny firenena i Widerøe, indraindray manidina hops fohy dia kilometatra vitsivitsy monja ary avy eo indraindray ao anaty ririnina.
Saingy tsy izany ny tantara feno. Widerøe dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina mahery setra indrindra eo amin'ny tontolon'ny fiara sy ny fanovana ny tontolo iainana. Mikaroka amin'ny alàlan'ny fiaramanidina elektrika rehetra, izay azony atao amin'ny tamba-jotra, satria ny governemanta norveziana dia maniry ny hiaingan'ny sidina herinaratra rehetra alohan'ny folo taona eo ho eo.
Vakio na henoy izay lazain'i Jens Flottau sy Stein Nilsen momba ilay CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika fandaharana eto. Voalohany, jeren'izy ireo ny toe-javatra COVID-19 amin'izao fotoana izao amin'ny fiaramanidina.
Ampahafantaro anay ny fomba fiasan'i Widerøe nandritra ny areti-mandringana. Tsy maintsy nampihena ny toy ny maro hafa ianao, saingy tsy toy ny maro amin'ny [tsy henoinao 00:03:14], sa tsy izany?
Ie, marina izany, fa ho antsika rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, dia 15 volana mafy tokoa tao nanomboka tamin'ny martsa 2020. Saingy manana tambajotram-pifandraisana tena manokana ao Norvezy izahay. Mitovy amin'ny rafitra fitateram-bahoaka any amin'ny faritra sasany amin'ny faritra ambanivohitra Norvezy izany, indrindra. Ka mazava ho azy, nifantoka betsaka tamin'ny fitazonana rafitra fitaterana tsara koa mandritra ny areti-mandringana.
Raha ny marina dia nanidina nanodidina ny 70 ka hatramin'ny 80% ny fahafaha-manao ara-dalàna isika, ny ankamaroan'ny vanim-potoana tao anatin'ny 15 volana lasa. Nidina ambany izahay tamin'ny toe-javatra areti-mandoza tena manokana, saingy manodidina ny 70 ka hatramin'ny 80%, nanidina izahay. Ny antsasaky ny 50% dia ny tambajotram-pifandraisana PSO any Norvezy, ary tambajotra tena lehibe ho an'ny ambanivohitra izany.
Nangataka tamin'ny minisiteran'ny fitaterana izahay mba hitazonana ny haavon'ny famokarana avo lenta amin'io tambajotra io, na eo aza ny fambolena ambany kabine mba hanohanana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny fitazonana ny tolotra fitaterana tsara amin'ny toe-javatra tena manokana. Mazava ho azy, tena faly izahay noho ny fanohanan'ny minisiteran'ny fitaterana ary misy ihany koa fanomezana onitra fanampiny ho anay sy ho an'ireo mpandraharaha hafa ao amin'ny tambajotra PSO any Norvezy.
Manana zotram-piaramanidina soedoà kely, antsoina hoe Air Leap, ary manana fitaterana fiakarana any amin'ny faritra avaratr'i Norvezy izahay, ary manidina amin'ny tambajotra PSO ihany koa. Ka ny governemanta any Norvezy dia nanao ezaka be dia be sy hafahafa mba hitazomana ny rafitry ny fitaterana handeha hamakivaky ilay valanaretina.
Ka lazainao fa 70 ka hatramin'ny 80% n'ny fahaizanao Wideroe dia mbola teo an-toerana fa afaka milaza ve ianao hoe firy ny isan'ny mpandeha nilatsaka?